भर्खरै शिक्षामन्त्रीले विद्यालय खोल्ने बारे गरे येस्तो घोषण ! - राप्ति पहिचान भर्खरै शिक्षामन्त्रीले विद्यालय खोल्ने बारे गरे येस्तो घोषण ! - राप्ति पहिचान
भर्खरै शिक्षामन्त्रीले विद्यालय खोल्ने बारे गरे येस्तो घोषण !
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नुभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
उनले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सम्पर्क स्थापितका लागि सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क र निजी विद्यालयमा सहुलियत रुपमा क्लोज युनिट ग्रुप (सियुजी) मा आबद्ध गराई सञ्चार सहजता बढाइएको बताए। कतिपय जिल्लाका विद्यालयले अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्यक्ष सिकाइ पनि आरम्भ गरिसकेका छन्